Iwo eTop 5 Metric uye Investment Vashambadzi vari Kugadzira muna 2015 | Martech Zone
Kechipiri, Salesforce yakaongorora vatengesi vanopfuura zviuru zvishanu pasirese kuti vanzwisise zvakakosha zvegore ra5,000 pamatanho ese edhijitari. Heino pfupiso yeiyo ripoti rakakwana iyo iwe yaunogona kurodha paSalesforce.com.
Nepo zvinonetsa zvakanyanya zvebhizimusi kuri kuvandudza kwebhizinesi idzva, mhando yemitungamire, uye kufambirana netekinoroji, kuti vashambadzi vanoshandisa sei mabhajeti uye kuteedzera kufambira mberi kunokatyamadza.
Nzvimbo dzepamusoro shanu dzekuwedzera Kushambadzira Investment
Yemagariro Media Kushambadzira
Zvemagariro Midhiya Kubatanidzwa
Nzvimbo-Yakavakirwa Nhare Yekutevera
Nepo paine kuwedzera kwekushandisa mune zvemagariro uye nhare, hapana chekudzivirira chokwadi chekuti email iri uye inoramba iri yakasimba pakukurukurirana svikiro kune chero dhijitari zano.
Wepamusoro mashanu Ekushambadzira Metric Ekubudirira
Mutengo Wekuchengetedza Kwevatengi
Saka ipapo iwe unayo ... zvemagariro uye nharembozha zviri kuwedzera kutariswa, asi ma metric akakosha anosanganisira kuchengetedza vatengi vakakura pamwe nekutora vatsva!
Tags: 2015kutenga vatengimutero wekuchengetedza vatengikugutsikana kwevatenginzvimbo-yakavakirwa nhare yekuteveramushambadzi ongororokushambadzira marimetrics ekushambadziraMobile mafomudzoka pakudyarakukura kwemarisalesforcesalesforce.comsocial media advertisingkubatana kwenhauSocial Media Marketing
Wedzera Tweetwall kune Yako Inotevera Chiitiko Ne Hootfeed